Vaovao - kofehin-kofehy voatavo
Fiberglass voatetika kofehy ao anatin'izany Tady voatetika ho an'ny BMC, kofehy voatetika ho an'ny thermoplastika, kofehy voatetika, kofehy voatetika Alkali (ZrO2 14,5% / 16.7%).
1). Tady voatetika ho an'ny BMC
Ny kofehy voatetika ho an'ny BMC dia mifanaraka amin'ny polyester tsy miangona, resin epoxy ary resins phenolika.
Ny fampiharana fampiasa farany dia misy ny indostrian'ny fitaterana, ny fananganana & ny fananganana, ny indostrian'ny elektronika & elektrika, mekanika ary ny hazavana.
2). Tady voatetika ho an'ny thermoplastika
Ny tsatokazo voatetika ho an'ny thermoplastic dia mifototra amin'ny mpandraharaha fampiraisana silana ary famolavolana habe manokana, mifanaraka amin'ny PA, PBT / PET, PP, AS / ABS, PC, PPS / PPO, POM, LCP;
E-Glass voatetika mijoro ho an'ny thermoplastic dia fantatra amin'ny fahamendrehana tady tsara, ny fivezivezena tsara ary ny fanodinana trano, manome fananana mekanika tena tsara sy avo lenta amin'ny vokatra vita.
3.) Tady voatetika lena
Ny tadin-tsakafo mando dia mifanaraka amin'ny polyester, epoxy ary resins phenolic ary gypsum.
Ny kofehin'ny voatetaka mando dia misy atiny mando mando ary manome fivezivezena miavaka, ao anatin'izany ny fanaparitahana anaty rano sy gypsum.
4.) Tady voatetika Alkali-resistant (ZrO2 14,5% / 16.7%)
I). Premix Tady voatetika Alkali – (ZrO2 14,5% / 16.7%)
Ny kofehy voadio Premix dia kofehy vita amin'ny vera mahatohitra alkali avo voapaika ho an'ny fampiasana ankapobeny natokana ho an'ny fividianana fitaovana hafa ary novokarin'ny fampiasana fanariana tamping na fizotra hafa tao anaty ampahany GRC namboarina.
Na dia eo ambanin'ny fatra avo lenta aza dia mora koa ny mampiditra azy, ary aorian'ny fampifangaroana kluster tsara. Ho an'ny famokarana singa GRC mahazatra toy ny fantson-drano na boatin-java-maneno, na fotodrafitrasa fananganana toy ny tabilao fizarazarana maivana, votoatin'ny zirconia 16,7% singa-pamokarana kofehy voatetika vita amin'ny herin'ny tara-pahazavana tsara kokoa
II). TEX ambany Tady voatetika Alkali – (ZrO2 14,5% / 16.7%)
Ny kofehy voatetika Low Tex dia kofehy avo lenta, ambany tex, mahazaka alkali, fibre vita amin'ny fibre fitaratra ho an'ny famolavolana ireo singa GRC ao anaty rafitra mifangaro maina na ireo fizotran'ny pr mua. Azo ampiasaina amin'ny famokarana singa prefabrika amin'ny singa GRC mahazatra ihany koa.
Ny rafitry ny mpandraharaha lena mandrafitra manokana dia manamora ny fifangaroana sy ny fihazonana ny fahamendrehana tsara mandritra ny fampifangaroana, amin'ny fisorohana ny fitafiana sy ny fitazonana ireo fananana mitambatra rehefa mifangaro amin'ny fitaovana maina. Ny kofehy miaraka amin'ny hakitroky ny kofehy tokana ambany dia mety hampitombo ny faritra voafaritra manokana miaraka amin'ny fandraisana anjara ambany, ary amin'izany dia hamokatra vokadehibe kokoa. Ny vokatra dia mety indrindra amin'ny fanomanana mialoha ny laona sy ny loko mifangaro.
III). Niparitaka ny rano Tady voatetika Alkali – (ZrO2 14,5% / 16.7%)
ny kofehy voatetika rano naparitaka dia tanjona manokana natokana ho an'ny kofehy voatetika alkali, mahazaka fangaro amin'ny simenitra sy ireo fitaovana hafa izay mila fanaparitahana avo. Indrindra ho an'ny fangaro fotaka manokana amin'ny fitafiana na amin'ny fahamendrehana amin'ny laona sy ny famokarana indostrialy manokana.
Ny rafitra ny haben'ny haben'ny vokatra dia azo zahana rano ary, rehefa afangaro amin'ny rano, dia azo zahana amin'ny monofilamenta. Nampiasaina tamin'ny loko hosodoko sy fanamboarana fanamboarana vita amin'ny beton, ary tamin'ny alàlan'ny dingana manokana hamokarana singa GRC mahazatra.